जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रश्नको झटारो हान्नुपर्ने ठाउँमै सहभागी किन कम? – Online Bichar
Online Bichar 28th November, 2018, Wednesday 9:15 AM
काठमाडौं, १२ मंसिर । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले केही समयअघि सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, स्थानीय सरकार बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सोच स्थानीय जनतामै छैन।
कसरी? हामीले सोध्यौं।
वर्षौं वर्षदेखि हाम्रो दिमागमा सिंहदरबार नै जरो गाडेर बसेको छ,ु उनले स्थानीय जनताको मनस्थिति विश्लेषण गर्दै भने, सडकपेटी बिग्रोस् वा बाटोमा फोहोरमैला थुप्रोस्, हामी सिधै मन्त्रालय ताक्छौं। जबकि, हामी आफैंले चुनाव जिताएर पठाएका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू यही कामका लागि बसेका छन्। हामीले स्थानीय समस्या लिएर सबभन्दा पहिला जाने उनीहरूकहीँ हो।
ुमन्त्रालयका कर्मचारी र ठूल्ठूला नेताहरूले जेसुकै गरून्, जेसुकै भनून्। हाम्रा लागि प्रधानमन्त्री भने पनि, सचिव भने पनि हाम्रै टोलका वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरू हुन्। उनीहरूले आफ्नो जिम्मेदारी बुझेका छैनन् भने हामी जनताले उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ, माथेमाको भनाइ थियो।
हामी कुरा गर्दैछौं, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नम्बर ३ ले गत शुक्रबार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइको।
कान्ति साँस्कृतिक केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा उठेको पहिलो प्रश्न नै ुसहभागी किन कम?ु भन्ने थियो। सोधेका थिए, हिक्मत केसीले।
मलाई पनि के विषयमा छलफल हुन लागेको थाहा थिएन। वडामा केही कार्यक्रम हुँदैछ भनेर बोलाइयो। हत्तपत्त आउँदा सुनुवाइ रहेछ, उनले भनिन्, यस्तो बेला त पहिल्यै सबैलाई खबर गरे पो सहभागी बढी हुन्छन्।
विष्णु गिरीले विकास निर्माणका काम द्रुत भए पनि व्यवस्थित नभएकोु गुनासो पोखे।
‘काम त तीव्र रूपमा भइरहेको देखिन्छ। तर, के अर्को चुनावसम्म ती विकासका अंश रहलान्?’ उनले प्रश्न गरे, ‘ढल बनोस्, ब्लक बनोस् वा बाटो बनोस्( गुणस्तर कस्तो भन्ने जानकारी खोई?’
जनप्रतिनिधिबीच काम बाँडफाँट र वडाका संघ(संस्थासँग कसरी समन्वय भइरहेको छ भन्ने पनि स्थानीयले जान्न चाहे।
सहभागीको प्रश्न सकिएपछि बोल्न थालेका वडाध्यक्ष केसीले लगभग डेढ घन्टाको जवाफमा भने, ुहामीले चुनावताका गर्छौं भनेका धेरै काम गरिसकेका छौं। केही छिट्टै पूरा हुने चरणमा छन्। चल्ला हातमा दिनेबित्तिकै अन्डा नपार्ने रहेछ। केही समय लाग्दो रहेछ।’
ुवडालाई दुर्गमबाट सुगममा परिणत गरेँ। सहर उज्यालो पारेँ। सडक चौडा गरेँ। वडा अस्पतालको हब पनि हो। अब यसलाई विशेष स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिनेछ। सबै उपचार यहाँ गरिनेछन्। स्थानीयलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था हुँदैछ। धुलोरहित सुन्दर सहरमा बस्ने सपना अब पूरा हुनेछ,ु उनले भने।
अध्यक्ष केसीले वडामा भएका संघ(संस्थासँग मिलेर काम गर्ने बाचा गरे। सँगसँगै, नाम मात्रका संघ(संस्था नवीकरण नगर्ने चेतावनी पनि दिए। वडामा तीन सय संघ(संस्था दर्ता छन्।
‘स्थानीय सरकार भनेको घरको अंशियारजस्तो हो। अंश लिने बेला केही समस्या आए पनि अरू बेला चाहिने भनेको अंशियार नै हो,’ उनले भने, ‘नागरिकको नजिक रहेर काम गर्ने हामीले हो। त्यसैले, हाम्रा कमी(कमजोरी देखाइदिन आग्रह गर्छु। वडामा राम्रो काम भए त्यसको अपनत्व सबैले लिन सक्छौं। नराम्रो काम भए जसले गरेको हो, उसैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’